musha Africa Peter Obi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeNigeria Yebhizimisi uye Wezvematongerwo enyika anozivikanwa se “Okwute ndi Igbo". Our Peter Obi Childhood Story plus Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva pamusoro pezivo yake yakawanda panyaya dzemari. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Peter Obi's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Peter Obi akaberekwa musi we 19th waJuly 1961 paOnitsha muAnambra State, Nigeria. Akaberekerwa mumhuri huru yeKgate yeKaturike ine zviduku zvidzinozivikanwa pamusoro pevabereki vake. Obi wechidiki akakurira muguta rekutengeserana reOnitsha muAnambra, pamwe chete nevana vababa vake Bibiana Adani (mukuru mukuru), Fabian Obi pakati pevamwe vemhuri yake.
Kukura muOnitsha, Obi aive mwana ane hunyanzvi aiziva kukosha kwemari pazera diki. Hazvina kutora nguva refu mudiki asati atora musoro kupinda mubhizinesi mushure mekufa kwababa vake paakanga akura 9.
Mudzidzi wepuraimari panguva iyoyo akatanga nekutenga kwakazara kweParafini iyo yaakatengesa mumabhodhoro. Iko kusarongeka kwebhizinesi mafungiro emwana wezera rake akaita amai vaObi vane hanya vakaratidza kutya kuti mari inogona kukanganisa simba pakukura kwake. Iye, zvakadaro, akadzora kutya kwake nekuratidza kuti akazvarwa aine simba rebhizinesi achinyora kufambira mberi mune zvedzidzo.
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Obi akawana dzidzo yake yekutanga kana yekutanga paSanta Maria Primary School muOnitsha. Akazobva aenda kuna Christ the King College (CKC), Onitsha apo aive nehuwandu hwekudzidzira kwake kuchikoro chekondari kana kuchikoro chepamusoro (zvichienderana nekudzidza kwake pfupi paBaba Joseph Secondary School muAuguleri).
Paaive paChrist the King College, Obi akachinja bhizimusi rake kuita zvekutengesa mazai, bhizinesi raakazotamisa kubva pakuva mugadziri weshangu nembatya dzakapinda mukugadzira kukuru. Hazvina kutora nguva refu pamberi pekuti mudzidzi wechikoro chesekondari ave muzvinabhizimusi akasimba uyo akaenda kuLondon neshamwari dzepfungwa seni ndokutanga kuunza zvinhu mumidziyo.
VERENGA Kamaru Usman Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kwapedza zvidzidzo zvekudzidza vakaona Obi achiendesa kuYunivhesiti yeNigeria, Nsukka (UNN) paakatanga kutora uzivi mugore re1980 uye akapedza kudzidza mu1984. Nzira iyo Obi yakaratidza nayo, ruzivo rwemabhizimisi uye ruzivo rwepamusoro rwakakosha kumambo wake wekutsvaga kwebhizimisi. Kuziva kwakasarudzira chisarudzo chake chekuwana ruzivo ruzhinji paHarvard Business School, London School of Economics, Chikoro cheKorogg Graduate School pakati pezvimwe zvinzvimbo zvakakurumbira.
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Yaiva paKellogg Graduate School iyo Obi yakakanganiswa nemudzidzisi wake kupinda muzvematongerwo enyika. Makore mushure meObi akaongorora mune zvematongerwe enyika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana nemunhu mukuru.
“Kupinda mune zvematongerwo enyika kwakatoita kuti ndive murombo asi hapana chandinobvunza nekuti ndiko kwandinoda kuti ndive Mwari. Iwo mufaro wekupa zvibereko sevhisi kune vanhu haigone kuverengerwa mu naira uye kobo. Kwandiri, zvese zvandinoda ndezvedu kuti tive nharaunda iri nani; kuchengeta varombo nevanhu ”.
Akayeuka Obi makore gumi gare gare.
Anotanga kumira pamugwagwa wake wepamberi yezvematongerwo enyika ndiyo nguva yake yekushumira segavhuna weAnambra State kwemakore 8 (2006-2014).
Kunyange zvazvo upfumi hwake hwose huri kuonekwa kuti hwakaburitsa kukurudzira munzvimbo dzose dzehurumende, zvingasava zvisinganakidze kuziva kuti Obi haana kumbove yakashata. Iye pakutanga akamborwisana kukunda muhurumende yehurumende yaakakwikwidza mu 2003 asi akapikira mumakore 3 gare gare mu2006 mushure mekutongwa kwemazuva mazhinji.
Obi akazobviswa mushure memwedzi minomwe muhofisi uye akadzoreredza mwedzi mitatu mushure megavhuna (ndatenda zvakare kumatare akakunda). Makore matatu mushure mekupedzisa basa rake rakazara, Obi akasarudzwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika Anodairira Opposition Party PDP, Atiku Abubakar. Achirondedzera zvikonzero shure kwekusarudza kwake mutungamiriri mukuru weAtiku Abubakar Presidential Campaign Organization, Otunba Gbenga Daniel akasimbisa kuti:
VERENGA Aliko Dangote Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
"Sarudzo yaVaObi yakakonzerwa nehujaya hwavo, ruzivo rwakakura nezve hupfumi hwepasirese nevemunharaunda pamwe nekuve nyanzvi mune zvemari, ruzivo rwese urwo Nigeria rwuri kudiwa zvakanyanya panguva ino".
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Peter Obi ave akaroora mukadzi wake Margaret Obi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu asina matambudziko emhuri.
Kunyangwe runyerekupe rwezvinetso zvinonzwisisika zvemuchato uye Margaret achange achida kurambana akabuda mu2017, akakurumidza kuvabvisa kuti vaone kuti imba yavo ichiri kuwedzera simba.
"Sei ndichifanira kufungidzira murwi iwoyo kana ndisina chinetso kumurume wangu? Ndini ndakaroorwa uye ndisina chikonzero chokufungisisa kurambana. "
Akazovhura runyori nyori.
Mhuri yavo inokomborerwa nevana vaviri Gabriella Nwamaka Frances Obi (mwanasikana), uye Gregory Peter Oseloka Obi (mwanakomana).
Kubva kurudyi: Mwanakomana waPeter Obi - mwanasikana - Peter Obi - Wife.
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Peter Obi ndiye Gavhuna wekutanga muNigeria kutsvaga kududzirwa kwemashoko eVatungamiriri vehurumende. Akanga ari gavhuna wekutanga akashanda kuti agadziridzwe Mutevedzeri chaiye kuMutungamiri uyewo akabatanidzwa mu Presidential Economic Management Team.
Ndiye mumwe wekutanga kwekushandira VaGavhuna vakachengetedza National Awards mu2011. Obi anotenda mune zvimwe zvematongerwo enyika eChinese kunyanya mutemo wekusabvumira vanhu kuti vabate mahofisi makuru kusvikira vashumira mumahofisi ezasi.
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Peter Obi ari kudzidzira Katurike uye Knight pane izvozvo. Kubatana kwake kunobudirira nechechi yeKaturike uye kushumira kuvanhu kwakaita kuti Papa Francis amupe Pontifical Equestrian Order yeSydney Sylvester, (Papa uye Marty).
Zita rokuti Akwete Ndi Igbo (iyo inoshandura seThe Rock) Obi inozivikanwa nokuda kwekuomesa kwake uye kusinganzwisisiki mamiriro ezvinhu ehupfumi kuitira chinangwa chekusimbisa kubudirira kwose.
Iye anewo maitiro ekugonesa hupenyu kuburikidza nekuvakwa kwezvipatara uye zvikoro kusangana nehutano uye zvido zvevanyori zvevanhu.
VERENGA Desmond Tutu Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Peter Obi Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Peter Obi anonzi akabhadhara mabhiriyoni eNaira asi anorarama hupenyu huri chirevo chepfuma yake yakawanda.
Kutanga, bhizinesi anonyaradza inobhururuka mune zvidzidzo zvehupfumi kana asingagoni kuwana chigaro mune bhizinesi uye anozivikanwa kuti akagoverana zvigaro neve plebeians panharaunda dzevanhu.
Chii chimwe? Obi anozivikanwa se "aka gum" (munhu asina maturo), chokwadi haaiti kupikisa uye anotaura achizvikudza.
“Segavhuna, pane kugara mumahotera umo vanhu vanobhadhara pamusoro peN500,000 husiku, ini ndakagara muhotera ini yandakabhadhara isingasviki zviuru makumi mashanu. Panzvimbo pekuva nemuranda wemakumi maviri, ini ndaive neyevashanu. Panzvimbo pekuchengetedza pamusoro pegumi dzimba dzevaeni, ndakavavhara ndokuzvidzivirira kuLodge ".
Nepo vazhinji vachigona kukakavadzana kuti kushandiswa kwakadaro kune chikamu chekugadzirisa matanho ekuchengetedza hurumende, zvingava zvinonakidza kuziva kuti Obi akaramba hanzvadzi yake yakatevera Adani chivigiro chekuviga asi asi akasarudza kuvaka chipatara uye kugadzirisa chikoro mukukudzwa kwake.
"Sezvo ini Katurike, zvandine chikwereti kwaari iyezvino minyengetero nekugadzirisa kwevanhu kuti vafare zvekufa kwemweya yavo uye kwete mukana wekuratidza upfumi hunofanira kunge hunoshandiswa kuwedzera kukosha kwevanhu."
Pamusoro pezvose, anogara achiedza kurarama mararamiro ane hutano uye anotenda vanhu vanorwara pavanodya zvinhu zvisingawirirani nemutemo wavo.
"Ndinogona kukuudza, pamakore makumi mashanu nemashanu, handisati ndamboenda kuchipatara, kunze kwekunge chiremba akati vaona kukura kudiki muhurongwa hwangu, vaida kuzvibvisa uye ndanga ndiri muchipatara kwemaawa maviri nekuda kweizvozvo."
Akazivisa makore akapfuura.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Peter Obi Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Linda Ikeji Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi